हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदाको यस्ताे असर ! – Ramailo Sandesh
हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदाको यस्ताे असर !
हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयको असर पेट्रोल पम्पहरूमा समेत देखिएको छ । हप्तामा शनिवार र आइतवार पेट्रोल पम्प बन्द हुँदा सोमवार पेट्रोल पम्पहरूमा भि`ड र लामो लाइन देखिएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका साझा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसहित केही पुराना पेट्रोल पम्प अगाडि इन्धन भर्नेको लामो लाइन लागेको छ ।
याे पनि, काठमाडौंको फर्पिङस्थित जंगलमा एक जोडी मृ“ त फेला परेका छन् । सोमबार बिहान फर्पिङको जंगलमा एक जोडी मृ“ त फेला परेका हुन् । मृ“ त फेला परेका युवक र युवतीको श“ व नजिकबाट प्रहरीले वि“ षादीको बट्टा समेत ब`रामद गरेको छ । उनीहरुको मृ“ त्युको कारण भने खुलिनसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
फेसबुकमार्फत चिनजान, प्रेमिका बनाएर सामूहिक बलात्कार